Tour – Nepali Family
बजार परिवार: भित्र र बाहिर
परिवार धेरै साना बजार को मुटु हो। पुस्ताले समुदायलाई खुवाउनको लागि आवश्यक कार्यहरूमा पिच गर्दछ – खाना अर्डर गर्ने र उठाउने, सेल्फ भण्डार गर्ने, कसाई गर्ने, क्लर्क गर्ने, लेखा बनाउने, र कानुनी कागजी कार्यहरू। धेरै परिवारको स्वामित्वमा रहेका बजारहरूले ग्राहकहरूलाई परिवारको रूपमा व्यवहार गर्छन्, व्यापार भित्र र बाहिर समय बाँड्छन्।
RGS परिवारको स्वामित्वमा रहेको बजार हो। यो हाम्रा सबै ग्राहकहरू हुन्। हामी एउटै परिवारको रूपमा हेर्छौं। हामीले हाम्रा उत्पादनहरू मात्र बिक्री गर्दैनौं। हामी टोलीको रूपमा काम गरिरहेका छौं। आवश्यक पर्दा हामी एकअर्कालाई सहयोग गर्ने प्रयास गर्छौं। जस्तै यदि कागजी कामहरू, कुनै स्वास्थ्य अवस्था वा कुनै व्याख्या वा कुनै यातायात आवश्यकताहरू भएका परिवारहरूमा आवश्यक परेमा, हामी तिनीहरूलाई पनि मद्दत गर्छौं। —रत्न खड्का, सह-मालिक, आरजीएस नेपाली मार्केट, बर्लिङटन
मेरो बुबा मासु काट्ने काम गर्नुहुन्थ्यो। र मेरा काका दुवैले ग्राहकहरूको सेवा गरे। तिनीहरूले मानिसहरूको घरमा धेरै डेलिभरी गरे। र तिनीहरू लगभग परिवारको हिस्सा हुनेछन् किनभने तिनीहरूले के बोलाइनेछ भनेर अनुमान गर्न सक्थे।—बहिनी मारी किस्लिच, संस्थापक जोन वी. “जेवी” किस्लिचकी नातिनी, किस्लिचको बजार, बर्लिंगटन
एक पारिवारिक व्यवसाय
बजार चलाउन धेरै हात चाहिन्छ। दोस्रो काम, बालबच्चा हेरचाह, र अन्य जिम्मेवारीहरू जुगल गर्न परिवारका सदस्यहरू एकअर्कामा निर्भर हुनुपर्छ। प्रारम्भिक बजारहरू एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गरिएको छ। परिवारहरू सँगै बस्ने र काम गर्नेगर्छन। तिनीहरू सामान्यतया माथिल्लो तला वा नजिकै बस्थे ता की पारिवारिक जीवनमा संलग्न हुदै ग्राहकहरूलाई सेवा दिन सजिलो बनाउदै। बालबालिका बजारमा हुर्किए र आवश्यक परेको ठाउँमा सहयोग गरे ।
आज परिवारहरू प्रायः टाढाको छिमेक वा उपनगरहरूमा बस्छन्, बजार जीवनबाट टाढा। धेरै बजार मालिकहरू आफ्ना छोराछोरीहरूका लागि फरक जीवनको आकांक्षा गर्छन्, जो स्कूल र खेलकुदमा व्यस्त छन् र भविष्यको लागि आफ्नै लक्ष्यहरू छन्।
यो स्टोर बाँच्नको लागि पैसा कमाउने तरिका भन्दा बढि हो। यो हाम्रो पृष्ठभूमि र हाम्रो इतिहास हो र चलिरहेको परम्परा हो। तर पहिलो कुरा यो हो कि उसलाई त्यो काम मनपर्छ। यो उनको जोश हो। उहाँ के गर्न हुर्कनुभयो र उहाँले आफ्नो बुबाबाट के प्राप्त गर्नुभयो। त्यसैले छोड्न सजिलो छैन। – अहमद अरेफकी छोरी, प्रबन्धक, नाडा इन्टरनेसनल बजार, विनोस्की
तिनीहरू सबै पसलमा काम गर्थे। मेरी काकी इभा कसाई थिइन् र [आन्टी] सोफिया डेलिभरी गर्ल थिइन्। मेरो बुबा [स्याम] रेगीस्टर गर्नेगर्नुहुन्थ्यो। जब म सानो थिएँ, त्यहाँ एक जना भाइ जोन थिए, जो पसलमा पनि काम गर्थे। म सेल्फहरूमा मद्दत गर्थे। म अलि बूढो भएपछि मैले दर्ता चलाउन सक्थे। उनीहरूले मलाई पनि ओसारपोसारमा आग्रह गर्थे। -मेरिल एपस्टेन, सह-संस्थापक मेयर एपस्टेनका नाति, एपस्टेन
शरद ऋतुमा सबैजना जम्मा भएर साउरक्राउट बनाउँछन्। केटाकेटीको हैसियतमा हामीले गर्नु पर्ने सानो काम थियो। हामीले ती सबै गोभी काट्नु पर्यो। र त्यसपछि मसला, सिरका राख्नु थियो। र दिनको अन्त्यसम्ममा राखिएको सामग्रीहरूले भरिएका ब्यारेलहरू पहिले नै तहखानेमा राखिन्थ्यो , र त्यसपछि सिल गरिन्थ्यो। -बहिनी मारी किस्लिच, संस्थापक “JV” Kieslich को नातिनी, Kieslich’s Market, Burlington
जहाँ ग्राहकहरू परिवार हुन्
बजारको पर्खाल भित्रको सम्बन्धमा ग्राहकहरू परिवारका सदस्यहरू जस्तै हुन्छन्। जब खानाले मानिसहरूलाई ढोकाबाट ल्याउन सक्छ, यो ग्राहक र मालिक बीचको विश्वास र स्नेह हो जसले तिनीहरूलाई फर्काउँछ। व्यापार मुखको शब्द द्वारा बढ्छ, किनकि ग्राहकहरूले साथी र परिवारलाई बजार संरक्षण गर्न प्रोत्साहित गर्छन्।
उसले उनको ढोका खोल्यो। मानिसहरू आउँछन् किनभने हामीलाई थाहा छ उसले भाडा, बिजुली तिर्नु पर्छ, र हामी उसले गरिरहेको यो राम्रो कामलाई समर्थन गर्न चाहन्छौं। -विक्टर योङ्गो, ग्राहक, एम. स्क्वायर भर्मन्ट, विनोस्की
म ढोका भित्र पस्ने बित्तिकै – तिनीहरूले भन्छन्, “ओह, तिमी कहाँ थियौ?” यसको मतलब तिनीहरूले मलाई खोज्छन् र मेरो ख्याल राख्छन्, र यो कतै छैन, कुनै ठाउँ छैन, जहाँ तपाईं जान सक्नुहुन्छ र मानिसहरूले केवल किनमेलको लागि तपाईंको ख्याल राख्छन्। त्यसैले म तिनीहरूलाई माया गर्छु, तिनीहरू मेरा दाजुभाइ र बहिनी हुन्। -इसाखा काउन्टा, ग्राहक, आरजीएस नेपाली मार्केट, बर्लिङटन
उस्तै परिचित र मिलनसार अनुहारहरू हेर्न पसलमा जाँदा सधैं स्फूर्ति मिल्थ्यो। चिच्क र उसको कर्मचारीले हामी सबै छिमेकी बच्चाहरूलाई नामबाट चिने। जब मैले हाई स्कूलबाट स्नातक गरें, उहाँ मेरो स्नातक पार्टीमा आउनुभयो। -शीला काभाना, ग्राहक, चिक्स मार्केट, विनोस्की
यी धेरैजसो स्थानीय बजारहरू, कहिलेकाहीं तपाईं आउनुभयो, एक व्यक्तिसँग कुरा गर्नुभयो, र तपाईंले निश्चित बिन्दुमा महसुस गर्नुहुन्छ कि त्यहाँ मित्रता छ, तपाईं सम्बन्धित भए जस्तो महसुस गर्नुहुन्छ। -पीटर केनी, ग्राहक, सामुदायिक हलाल स्टोर, बर्लिंगटन
राम्रो जीवन निर्माण गर्ने काड परिश्रम.
बजार स्वामित्वले भर्खरै आएका परिवारहरूको लागि स्वतन्त्रता र आर्थिक सुरक्षाको लागि मार्ग प्रदान गर्दछ। मालिकहरूले लामो समयसम्म काम गर्छन्, प्रायः जगल गरेर दुईवटा कामहरू गरि आफ्ना छोराछोरीको लागि राम्रो जीवन र भविष्य सिर्जना गर्छन्। प्रारम्भिक बजारको मालिकहरूले कपडा र काठ मिलहरू र अन्य उद्योगहरूमा दोस्रो काम गरे। आज धेरै मालिकहरूले सेवा वा निर्माण व्यवसायहरूमा ढिलो शिफ्टमा काम गर्छन् ताकि तिनीहरू व्यापारको समयमा बजारमा हुन सकून भनेर।
म चाहन्छु कि मानिसहरूले बुजुन की आप्रवासीहरूले कति मेहनत गर्छन्। म यो देशमा बिना अंग्रेजी र $४५ लीयरआएँ र अहीले मेरो सफल व्यवसाय छ। यो किनभने मैले काम गरिरहे, र मैले मेरो सम्पत्ति कर र मेरो स्कूल कर तिर्छु। र मेरो जीवन यस्तै छ।
-डाडो वुजानोभिक, मालिक, यूरो मार्केट, दक्षिण बर्लिंगटन
उनी आफैंले कलेज शिक्षा पाएका थिएनन्, तर उनी आफ्ना छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा र राम्रो जीवन दिन चाहन्थे। उसलाई लाग्यो कि यो साँच्चै पारिवारिक व्यवसाय हो, जहाँ हामी सबै मिलेर बसेका थियौं। उसलाई आफ्नै व्यवसायको स्वामित्व र आफ्नै मालिक हुन मन पर्थ्यो। -जुडी फ्रुमोफ, छोरी, मालिक मोरिस रोम, रोमको किराना, बर्लिंगटन
मैले मेरा छोराछोरीको भविष्यको लागि पनि सोच्न आवश्यक छ। म मेरा छोराछोरीहरूलाई मैले पहिले गरेको नै सबै कुरा गर्न आवश्यक छ भन्ने आशा गर्दिन। यदि तिनीहरू मैले पहिले नै गरेको काम गर्न चाहन्छन् भने गर्दा हुन्छ। तर यदि तिनीहरू यो चाहँदैनन् भने, तिनीहरूको आफ्नै छनौट छ। म तिनीहरूलाई म भन्दा राम्रो चाहन्छु, र म तिनीहरूले केही फरक गरेको चाहन्छु। – एन्थोनी ट्रान, मालिक जोन र हुओङ ट्रानको छोरा, थाई फाट मार्केट; मालिक, साइगन किचन, बर्लिंगटन
हामीले यसलाई सधैं सामान्य रूपमा लिएका छौं। हजुरबुवाको पसल थियो र हजुरबुबा सधै पसलमा हुनुहुन्थ्यो। -सिस्टर मारी किस्लिच, संस्थापक “JV” Kieslich को नातिनी, Kieslich’s Market, Burlington